अरुको सम्पत्तिमाथि धावा बोलेपछि भुवन केसीमाथि पुलिस केस ! करोडौं क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएपछि केसीलाई फसाद !
Stock Market टेलिभिजन हेर्नुहोस् रेडियो सुन्नुहोस्
ARCHIVE, MUDRA MAMILA » अरुको सम्पत्तिमाथि धावा बोलेपछि भुवन केसीमाथि पुलिस केस ! करोडौं क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएपछि केसीलाई फसाद !
काठमाडौँ- नेपाली चलचित्रका नायक भुवन केसीमाथि चोरीको आरोपमा प्रहरीमा मुद्धा परेको छ ।केसीले‘कृ’ फिल्मको ‘उकालीमा पछि–पछि, ओरालीमा अघि–अघि’ बोलको गीतमा चोरी गरेपछि उनी विरुद्ध मुद्धा परेको हो । ३३ वर्षअगाडि सयपत्री मुभिज्ले शम्भु प्रधानको निर्देशनमा निर्माण गरेको फिल्म सम्झनाको यो गीतमा उतिबेला भुवन केसी र तृप्ती नाडकर देखिएका थिए । त्यही गीत अहिले नयाँ फिल्म ‘कृ’ मा हालिएको छ, जसमा भुवनका छोरा अनमोल र नायिका अदिती बुढाथोकीहरु छन् । उजुरकर्ता उनै चलचित्र निर्देशक शम्भु प्रधान हुन् ।
आफ्नो स्वामीत्वमा रहेको उक्त गीत प्रयोग गरेबापत शम्भु प्रधानले कूल आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम क्षतिपूर्तिस्वरुप दावी गरेका छन् । सोसम्बन्धी ऐन, २०५९ को दफा २५ (१) (क) र (ख) बमोजिमको कसुर गरेका छन्, भुवन केसी र सुवाष गिरीले । मुद्धाको फाइल टेकुस्थित प्रहरी परिसरका डिएसपी मोहन थापाको टेबुलमा छ । दावीबमोजिम क्षतिपूर्ति दिँदा पनि एक करोडभन्दा बढी तिर्नुपर्छ । तर, केही दिनअघि ‘कृ’ पक्षका कानुन व्यवसायी र प्रहरीले शम्भुलाई ‘दुई–तीन लाख रुपैयाँ लिनुस्, चूप लागेर बस्नुस्’ भनेका छन् । तर शम्भु केहि लाख लिएर यो मुद्धा टुंग्याउने पक्षमा छैनन् !
प्रकाशित : Wednesday, March 07, 2018
Tags : ARCHIVE, MUDRA MAMILA
आफुलाई कडा प्रश्न सोधेको भन्दै सञ्चारमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा टेलिभिजन कार्यक्रम 'सिधा प्रश्न' बन्द !
भाटभटेनीको ठगी धन्दा नम्बर ३ : ४०७ रुपैयाँ पर्ने सामानलाई ४ हजार ८ सय ८४ रुपैयाँ ९६ पैसा !
रत्नपार्कमा कपडा बेच्ने बुद्धिबहादुर यसरी भए करोडौं सम्पत्तिका मालिक !
एसएलसी फेल भएर के भो ? किस्मतमा पीएचडी होल्डरलाई जागिर खुवांउन लेखेको रहेछ
EXCLUSIVE: भाटभटेनीको ट्रायल रुममा सीसीक्यामरा, गोप्य रुपमा खिचिन्छ ग्राहकका नाङ्गा तस्विर !
'सामसुङको आइफोन' र नेपाल टेलिभिजन काण्ड सेलाउन नपाउँदै सञ्चारमन्त्रीको अर्को 'भालु' काण्ड !
'आफ्नै ससुरासँग चुनाव लड्दा आमा रुनुभएछ', 'माइलोले गरीखाने भएन' भनेर चिन्ता गर्नुहुन्थ्यो'